Maarso | 2009 | WEEJIDOW
Archive for Maarso, 2009
Maarso 31, 2009
War Deg Deg ah: Kooxo hubeysan oo xalay weeraray ciidamada AMISOM iyo kuwa DF ee fadhiya qeybo ka mid ah wadada Maka Al Mukarama
Fiidnimadii xalay intii u dhexeysay 7-8:00dii fiidnimo ayaa kooxo hubeysan waxay weerar ku qaadeen fariisimada ay ciidamada milateriga DF iyo kuwa AMISOM ay ku leeyihin agagaarka gurigii hore ee shaqaalaha oo ku yaala wadada Maka Al Mukarama ee magaalada Muqdisho.
Weerarkan oo socday muddo illaa 30 daqiiqo gaareysa ayaa ku bilowday baasukeyaal lagu tuuray goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada AMISOM iyo kuwa DF ee fadhiya wadadaasi, waxaana ka dib halkaasi ka bilaabatay tacshiirad xoogan oo labada dhinac dhexmareysay, iyo qaraxyo la maqlayey intii ay tacshiiradu socotay, waxaana iska horimaadkaasi uu dhamaaday markii kooxihii halkaasi soo weeraray ay dib isaga laabteen.
Ma jiro illaa hadda qasaare la sheegay in shaqaaqadaasi ay ka soo gaartay shacabka halkaasi ka dhow, lamana oga haddii uu jiro waxyeelo soo kala gaartay labada dhinac ee halkaasi isku fara saaray hase ahatee intii uu socday iska horimaadkaasi kooban ayaa waxa khal khal xoogan iyo cabsiba ay soo wajahday dadweynaha ku degan goobahaasi oo iyagu u badan meelo si aad ah loo degan yahay oo dagaalada aysan saameyn weyn ku yeelanin.
Xaalada ayaa saaka caadi aheyd, dagaalkii xalay ka dhacay wadada Maka Al-mukaramana ma jiro wax saamayn ah oo uu ku yeeshay dhaq-dhaqaaqa ganacsiga dadka iyo gaadiidka ee waddadaasi waxaana ay ku soo beegantay xili shalay isgoyska Dabka oo ku dhow gurigi shaqaalaha ay ka dhaceen dagaalo iyo falal kale oo lagu dilay dad uu ka mid ahaa siyaasi caan ah oo lagu magacaabi jiray marxuum C/raxmaan Max’uud Jimcaale (Shifti).
Safaarada Maraykanka ee magaalada Addis ababa oo fariimo digniin ah u dirtay muwaadiniin-teeda ku sugan dalka Itoobiya
Fariin digniin ah oo ka soo baxday Safaaradda dowlada Maraykanka ay ku leedahay magaalada Addis-Ababa ee dalka Itoobiya ayaa la gaarsiiyey dhamaan muwaadiniinta Ameerikaanka ah ee dalkaasi ku sugan taasoo kula talineysa inaanay safar ku tegin saddex ka mid ah magaalooyinka ku yaalla dhulka is maamulka Somalida Itoobiya.
Qoraalka safaarada Maraykanka oo qaab E-mail ah lagu gaarsiiyey muwaadiniinteeda ku sugan dalkaasi Itoobiya ayaa waxay qoraalkeeda ku sheegtay in arrintan ay timid kaddib markii dhowaan Hogaamiyaha Al-qaacidah Sheekh Osama Bin Laden uu soo diray farriin ku wajahan dhinacyada Somalida gaar ahaan kooxaha ka soo horjeeda dawladda oo ugu baaqay inay la dagaalamaan dawladda madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo uu ku eedeeyey iney u shaqeyso gacan saarna la leedahay dalalka reer galbeedka.
Si aysan u dhicin in qaraxyo ama waxyeello kale loo gaysto ayaa waxay Muwaadiniinteeda Maraykanka uga digtay safaaradda inay safarro ku tagaan magaalooyinka Dirirdhabe, Harar iyo Jigjiga oo ku dhamantood ku yaala dhulka ismamulka Somalida ee dalka Itoobiya iyadoo sidoo kale uga digtay inay tagaan meelaha dadku ku badan yihiin sida wadooyinka iyo hoteelada, isla markaana ay iska ilaaliyaan iney u dhowaadaan boorsooyinka waaweyn iyo alaabada looga tago jidadka kuwaasoo aan la ogeyn cida iska leh, lagana yaabo in waxyaabo qarxa ay ku jiraan.
Maleeshiyo iyo gaadiid ka soo baxsaday Col. Barre Hiiraale oo ku biiray xoogaga Islaamyiinta ee gacanta kau haya gobolka Gedo
In ka badan illaa 100 nin oo iskugu jira ciidamadii DF ee maamulada Bay iyo Bakool iyo maleeshiyadii Col. Barre Hiiraale ee ku wada sugnaa degmada Doolow ee ku taala xadka gobolka Gedo uu la wadaago Ismaamulka Somalida ee dalka Itoobiya ayaa kasoo goostay mas’uuliyiintoodii halkaasi ku sugneyd iyagoo ku soo biiray xoogaga Xisbul islaam ee ku sugan degmada Luuq ee isla giobolka Gedo.
Sarkaal u hadlay xoogaga Xisbul islaam ee degmada Luuq oo lagu magacaabo Maxamed Ibraahim Indhabuur ayaa sheegay in isa soo dhiibida ciidamadan ay ka dambeysay ka gadaal markii ay xiriir la soo sameeyeen kaasoo uu sheegay iney kaga dalbadeen in cafis loo fidiyo si ay isku soo dhiibaan, wuxuuna xusay iney ka ogoaladeen una balan qaadeen iney nabad gelin doonaan haddii ay u yimaadaan.
“Ciidamadan waa 100 nin ku dhowaad, waxay ka mid ahaayeen kuwii daba socday Itoobiya iyo kuwii dowlad sheega ahaa ee goboladan ka talin jiray, waxayna wateen illaa labo gaari oo ah kuwa waaweyn iyo hubkooda oo dhan, waxayna inoo sheegeen markii ay inoo yimaadeen ay la kulmeen dhibaatooyin badan oo ay ka mid yihiin gaajo iyo daryeel xumo aad u ba’an, waanu soo dhoweyney mana jiraan wax dhibaatooyin ah aan loo geysan doono waxayna ku soo biireen walaalahood” ayuu yiri sarkaalkaasi oo sidoo kale sheegay in ciidamadan soo baxsaday ay u sheegeen in ay jidka ku soo jiraan ciidamo kale oo ka soo baxsaday degmada Doolow oo wadada ku soo jira. iyadoo dhinaca uusan jirin jirin war arintan ku soo saabsan oo ka soo baxay mas’uuliyiinta iyo xildhibaanada DF ee ku sugan degmada Doolow.
Xisbiga Kulmiye oo ka hadlay mawqifkiisa ku wajahan muddo-kordhinta M/weynaha Somaliland iyo ku-xigeenkiisa loo sameeyay
Xisbiga Mucaaradka ah ee Kulmiye ayaa shaaca ka qaaday in aanay aqoonsanayn Madaxweyne Rayaale iyo Xukuumaddiisa kuwo ku jooga sharci wixii ka dambeeya 6-da Bisha April, haddii aan laysaga iman Khilaafka Siyaasadeed ee Somaliland. Waxaanay sharci-darro ku tilmaameen go’aankii Golaha Guurtida Somaliland muddada ugu kordhiyeen M/weyne Rayaale iyo ku-xigeenkiisa.
Xisbiga Mucaaradka ah ee kulmiye oo maanta soo saaray War-Saxaafadeed arrintan ku aaddan, ayaa sheegay in kulan ballaadhan oo ay yeesheen Hoggaanka iyo Guddiyada Xisbigu ay isla gaadheen qoddobo ay ka mid yihiin in aanay Madaxweyne Rayaale iyo ku-xigeenkiisa u aqoonsan doonin Madaxda Somaliland, isla markaana aanay sidaa ula macaamuli doonin.
Xisbiga Kulmiye wuxuu sheegay in ay diyaar u yihiin in dalka laga qabto Doorasho xor iyo xalaal ah, hase ahaatee taas masuuliyadeeda ay saaran tahay Xukuumadda Somaliland ee uu Madaxweyne Rayaale hoggaamiyo.
Gudoomiye ku xigeenka G/Banaadir oo magacaabay gudi soo baara dilkii C/raxmaan Shifti
Moqdisho:- Maamulka Gobolka Banaadir ayaa ku dhawaaqay inay magacaabeen Gudi gaar ah oo soo baara dilkii shalay Magaalada Muqdisho loogu geystay Siyaasiga C/raxmaan Shifti iyo labo ka tirsan Ilaaladiisa.
Gudoomiye Kuxigeenka Maamulka Gobolka Banaadir C/fataax Shaaweeye ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay geerida ku timid Siyaasiga C/raxmaan Shifti oo ahaa Afhayeenkii Shirkii Dib u Heshiisiinta, ahaana Siyaasi rug cadaa ah.
“Ka maamul ahaan waxaan ka xunahay dilka C/raxmaan Shifti oo ahaa nin qaali ah, waana ka tacsiyadeynayaa, Maamulka waxaa uu magacaabay gudi soo baara dilkiisa”ayuu yiri C/fataax Shaaweeye oo la sheegay in Ciidamo taabacsan isaga inay si bareer ah u dileen Siyaasiga iyo labo nin oo la socotay.
C/fataax Shaaweeye ayaa sidoo kale sheegay in gudigaas uu soo baari doono xaqiiqda ka jirta in si bareer ah loo dilay, waxaana uu tibaaxay in hadii ay helaan cadeymo muujinaya in si ula kac ah loo dilay Siyaasiga ay Maxkamad soo taagi doonaan kooxihii ka dambeeyay dilkiisa.
Sidoo kale Xildhibaan Xuseen Caraale oo isku beel ah Siyaasiga la dilay ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay, waxaana uu sheegay in Siyaasiga uu maalmihii u dambeeyay ka tirsanaa Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke.
Afhayeenka Ciidaka Booliska C/llaahi Xasan Bariise ayaa isna muujiyay sida uu uga xun yahay, waxaana uu cadeeyay in Marxuumka lala dilay labo ka mid ah Istaafkiisa, isagoona qiray in ciidamo ku sugnaa Saldhiga Waabari ay dileen, waxaana uu sheegay in kulan deg deg ah uu arrintaas ka yeeshay Gudiga Ammaanka qaranka.
Si kastaba ha ahaatee qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa aad uga walaacay dilka Siyaasiga C/raxmaan Shifti oo ahaa siyaasi caan ah oo ka mid ahaa Jabhadihii dalka soo maray, isla markaana ahaa nin cod kar ah oo ka qeyb geli jiray barnaamijyada doodaha siyaasada ee ka bixi jiray Idaacadaha Muqdisho .
Madaxda Carabta oo ku gacan sayrtay in la soo qabto madaxweynaha Sudan Al-Bashiir .
Doxa:- Madaxweynayaasha Jaamacada Carabta ayaa si gaar ahaan uga hadlay Go’aankii Maxkamada Aduunka ku soo rogtay Madaxweynaha Sudan Albashiir in lagu soo xero ku waasi oo ku shirsanaa magaalada Doxa ee caasimada dalka Qadar .
Xalay ayaa waxa ay carabta qaateen in ay jibiyaan go’aankii maxkamada dambiyada dagaalka ee caalamiga ah ee dalbanayey in la soo qabto madaxweynaha wadanka Suudaan Jeneral Cumar Xasan Al-Bashiir.
Kulankaasi markii uu soo dhamaadey habeenimadii xaley ayaa waxaa laga soo saarey warmurtiyeed ay si wadajir ah qalinka ugu duugeen hogaamiyeyasha Carbeed waxay ku sheegeen inay si weyn u taageerayaan oo ay ayidsan yihiin Madaxweyne Al-Bashiir .
Go’aankan ay soo saareen Madaxda Carbeed ayaa waxaa sidoo kale saxiixay wadamada Jibuuti iyo Lubnaan oo iyagu horey u saxiixan xeerarka maxkamada damniga dagaalka ee caalamiga ah.
Madaxweynaha wadanka Suudaan Jeneral Cumar Al-Bashiir ayaa uga mahadcliyey madaxda dalka Carbeed taageeradooda ay siiyeen, waxaana uu si gaar ah u amaanay dawlada Qadar oo shirka martigalisey .
“Qadar waa Dowlada taageero buuxda I siisay waana dowlada diidey inay saxiixaan xeerka maxkamada dambiyada dagaalka ee dhigaya in dawladaha saxiixa heshiiskaasi ay soo wareejiyaan dadka maxkamadu doon doonayso ee loo haysto dambiyada dagaal ee gacntooda ku sameesteen ”.
War Deg Deg ah: Iska horimaad dhaawac Sababay oo galabta ka dhacay Degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir.
Maarso 29, 2009
Iska horimaad dhaawac Sababay oo u dhaxeeyay kooxo hubaysan ayaa galabta ka dhacay Degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir.
Iska horimaadkaan oo aan la ogeyn waxyaabaha dhaliyay ayaa galabta kooxo hubaysan waxaa uu ku dhexmaray degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir iyadoo iska horimaadkaasina uu sababay dhaawac dad rayid ah.
Inta la ogyahay 11-qofood oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa ku dhaawacmay rasaastii ay is weydaarsadeen labada dhinac ee galabta ku dagaalamay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir kuwaasi oo dhaawacsooda lageeyay cusbitaalka Keysanay ee Magaalada Muqdisho.
Rufaaci Max’ed Salaad oo madax u ah gudiga gaadiidka Gurmadka deg dega ayaa Caawa Idaacada Waajidpress u sheegay in iska horimaadka ay ku dhaawacmeen dad u badan rayid islamarkaana ay gaarsiiyeen cusbitaalada Magaalada Muqdisho.
Ma’ahan markii ugu horeeysay oo iska horimaad dhaawac sababay uu ka dhaco Magaalada Muqdisho,waxaana uu ku soo aadayaa xili maalmihii u dambeeyay qeybo ka mid ah gudaha Magaalada Muqdisho ay isku fara saareen qaar ka mid ah xoogaga Muqaawamada e xiili la wada dagaalami jiray Ciidamada Ethiopia.
Wasaaradda awqaafta iyo arimaha diinta ee DF oo shacabka Somalida ugu baaqday Soon afar maalmood ah oo ka bilaabanaya
Wasiirka wasaaraha awqaafta iyo arimaha diinta ee DF Somalia Sheekh Nuur Cali Aadan ayaa maanta ugu baaqay guud ahaan shacabka Somaliyed iney soomaan muddo afar maalmood ah si ALLE looga baryo inuu ka dulqaado abaaraha ka jira qaar ka mid ah dalka ee galaafanaya nolosha iyo dad iyo Duunyo fara badan oo deegaandaasi ku dhaqan.
Wasiirka oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa intaa ku daray in soonkaasi oo ka bilaaban doona maalinta talaadada ah ee soo socota uu socon doono illaa maalinta Jimcaha oo sidoo kale uu sheegay in la isugu soo bixi doono Salaatul Istisqaa ama salaada roob-doonka si alle looga baryo inuu roob iyo raxmad badan ugu deeqo meelaha ay abaaruhu ka jiraan ee dalka si ay u badbaadaan inta ka hartay dadka iyo duunyada weli abaarahaasi ay sii galaafaneyso.
“Waxaan ugu baaqayaa dadweynaha iyo ganacsatada Somaliyed iney u gurmadaan dadka walaalahood ah ee ku tabaaleysan qaar ka mid ah gobolada dalka ee abaaruhu ay aafeeyeen kuwaasoo qarka u saaran ineysan u dhintaan cunto iy biyo la’aan oo ah labada shey ee nafeydu ay ku nooshahay, waxaana alle uga baryayaa inuu dalkeena abaarta ka dulqaado” ayuu yiri Wasiirka wasaaraha awqaafta iyo arimaha diinta ee DF Somalia Sheekh Nuur Cali Aadan.
Madaxweynaha Soomaaliya oo Dooxa u duulay
Madaxweynaha Dowladda Midnimada Qaran ee Soomaaliya Shiikh Shariif Shiikh Axmed iyo Wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta waxay ka amba baxeen Caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, iyagoo ku sii jeeday Magaalada Dooxa ee Dalka Qadar.
Madaxweynaha oo uu sii sagootiyay Ra’iisal Cumar C/rashiid ayaa waxaa socdaalka ku wehlinayay Raiisul Wasaare ku xigeenka ahna Wasiirka Maaliyada Shariif Xassan Sheikh Aadan, Wasiirrada Arrimaha Gudaha Shiikh C/qaadir Cali Cumar, Waxbarashada Axmed C/llaahi Waayeel, Gaadiidka Cirka iyo Dhulka Cali Axmed Jaamac Jengeli iyo xubno kale oo u badan howl-wadeennada xafiiska Madaxweynaha.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa wuxuu Magaalada Doxa ee dalka Qadar uga qeybgelayaan Shir ay halkaas ku leeyihiin Madaxda Dalalka Jaamacadda Carabta, iyadoo ay xusid mudan tahay in shirkii Wasiirrada Arrimaha Dibadda ee dalalka Jaamacadda Carabta si weyn loogu lafo-guray Arrimaha Dalka Soomaaliya.
Si kastaba arrintu ha ahaatee, Safarka uu amba baxay madaxweynaha Soomaaliya Shiikh Shariif Shiikh Axmed ayaa wuxuu ku soo beegmayaa iyadoo madaxweynaha uu dorraad ka soo laabtay safar uu ku soo kala dalal dhowr ah oo ka tirsan Qaaradda Afrika.
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Maarso, 2009.